डा कोइरालाको खण्डनःसभापतिसँग तारे होटलमा वार्ता भएको भन्ने समाचार भ्रामक – Tandav News
ताण्डव न्यूज द्वारा २०७७ भाद्र १९ गते शुक्रबार १३:२१ मा प्रकाशित
नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले पार्टीको महाधिवेशन नजिकिएसँगै सभापति शेरबहादुर देउवा र आफूबीच तारे होटेलमा गोप्य भेटघाट भएको भन्ने समाचारको खण्डन गरेका छन ।
बिपी कोइराला लोकतन्त्र संंर्वद्धन केन्द्रले आयोजना गरेको कार्यक्रममा महामन्त्री डा. कोइरालाले आफू एक महिनादेखि घरबाहिर ननिस्केको अवगत गराउँदै त्यस्ता तथ्यहीन समाचारका भ्रममा नपर्न आग्रह गरे । कार्यक्रममा उनले पार्टीको आगामी १४औँ महाधिवेशनमा नेतृत्व परिवर्तन सँगसँगै विचार र सिद्धान्तमा समेत घनीभूत छलफल हुनुपर्ने बताए ।
महामन्त्री डा .कोइरालाले कोभिड–१९का कारण केही महिना सारेर भए पनि यथासक्दो समयमा महाधिवेशन गर्नाको विकल्प नभएको धारणा व्यक्त गरे । साथै उनले सरकारले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याए पनि कृषि मलको अभावले किसानको अवस्था दयनीय भएको बताए। रासस
संसद विघटन लोकतन्त्रमाथिको प्रहार होः देउवा
आइटिएफ टेनिस : ३५ वर्ष माथिको उपाधि कमल भण्डारीलाई
निर्वाचनले राजनीतिक स्थायित्व आउँछ : पूर्वमन्त्री बाँस्कोटा
महानगरलाई भण्डारीको चुनौती, ‘मापदण्ड विपरीत भए भत्काउन तयार छु’